Ogaden News Agency (ONA) – Xuska Maalinta Xasuuqa Ogadenya oo Lagu Qabtay Dalka Finland
Xuska Maalinta Xasuuqa Ogadenya oo Lagu Qabtay Dalka Finland
Jaaliyadda S.Ogadenya iyo Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya (OYSU) Finland ayaa siwadajir ah u qabtay mxuska Maalinta Xasuuqa Ogadenya. Munaasabadan ayaa si heersare ah loosoo agaasimay waxayna jaaliyadda Somaalida Ogadenya ee dalkan Finland iyo Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadeniya kuwada qabteen maanta oy taariikhdu ahayd 15.2.2015 xuska Maalintan oo taariikhda umadda Ogadenya u leh xusuus gaar ah.
Waxaa ugu horeynba lagu furay aayado quraan ah iyo heesta calanka, kadibna waxaa shirka furay gudoomiyaha jaaliyadda mudane Maxamed Muxyadiin oo ka warbixiyey taariikhda munaasabadan, ka dibna waxaa hadalka lawareegay xoghaya OYSU Finland mudane Ugaas oo hadal kooban goobta ka soojeediyey.
Intaa ka dib ayaa waxaa codbaahiya lawareegay hogaanka abaabulka iyo arimaha bulshada Oysu Finland mudane Shaafi oo qudbad qiiro leh goobta ka akhriyey iyo weliba dhacdooyin uu goobjoog u haa sida xasuuqii ka dhacay magaalada Wardheer 1994tii.
Waxaa sidoo kale magrafoonka qaatay hogaanka samafalka iyo xuquuqul insaanka OYSU Finland mudane Cabdirashiid Yuusuf oo aad ugu dhiraaday xasuuqa ka socda Ogadenya dhacdo dhacdona isu dultaagay ilaa dadkiiba moodeen inay sitoosa u daawanayaan dhacdooyinkaas taniyo kolkii Ogadenya la wareejiyey ilaa 2015.
Xubno badan oonan kobtan kuwada xusi Karin ayaa goobta hadalo dhaxal gal ah ka akhriyey sida haween odayaal iyo dhalinyaraba. Waxaa xusid mudan oo madasha qudbadh dhaxalgal ah dhinacyo badana taabaneysey ka khriyeu mudane Bedel Axmed oo khudbad dheer ka jediyay madasha oo kaga xogwaramayo halganka Ogadenya iyo marxaladuhuu soo maray.
Guntii iyo gabagabadii shirkan ayaa Ku soo idlaaday caawa 20:00 fiidmo jawi aad u heersaraysa.